ခြေတံသွယ်လျလှပတယ်ထင်ရစေဖို့ ဘယ်လိုပုံစံဝတ်စားပြင်ဆင်ရမလဲ ? – Trend.com.mm
ခြေတံသွယ်လျလှပတယ်ထင်ရစေဖို့ ဘယ်လိုပုံစံဝတ်စားပြင်ဆင်ရမလဲ ?
Posted on November 14, 2017 by Noel
မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ခြေတံလေးတွေသွယ်လျပြီးလှပနေတာကိုပဲ လိုချင်ကြပါတယ်။ ခြေတံလေးတွေ သွယ်စင်းနေတာက ပိုပြီးတော့စမတ်ကျကျနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်လှစေပါတယ်။သင့်ရဲ့ ခြေတံကရော သေးသေးသွယ်သွယ်လေးပဲလား။ဒါမှမဟုတ် ခြေတံလေးက ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတာလား။ အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ သင့်ရဲ့ ခြေတံကိုအရင်ကထက်ပိုပြီး သွယ်လျတယ်ထင်ရစေမှာပါ။ဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်။
အမြဲတမ်းဘောင်းဘီရှည်ပဲဝတ်နေတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ခြေတံကိုမမြင်ရလို့ သေးသွယ်မှန်း မသိသာစေပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်လေ စကတ်တိုလေးတွေ၊ဂါဝန်တိုလေးတွေ ၀တ်ကြည့်ပါ။စကတ်အရှည်က သင့်ရဲ့ ခြေထောက်ကိုပိုပြီးတိုစေလို့ ၀တ်မယ်ဆိုရင် ဒူးအထက်စကတ်လေးတွေဝတ်သင့်ပါတယ်။
ခါးစည်းကြိုးပါတဲ့စကတ်၊ဘောင်းဘီတွေက ခါးကိုပိုပြီးသေးသွယ်စေတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ ခြေတံကိုလည်း ပိုပြီးသွယ်လျစေပါတယ်တဲ့။ဖက်ရှင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်း အများဆုံးဝတ်တဲ့ပုံစံကလည်း ခါးစည်းပါတဲ့စကတ်၊ဘောင်းဘီတွေပါ။ ခါးသေးသွားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုပိုပြီးရှည်တယ်ထင်ရစေပါတယ်။
အရောင်စုံတဲ့စကတ်တွေ၊ဘောင်းဘီတွေဝတ်မယ့်အစား ခြေတံပိုပြီးသွယ်လျစေဖို့ ဒေါင်လိုက်အစင်းကြောင်းပါတဲ့စကတ်တွေ၊ဘောင်းဘီတွေဝတ်ပါ။အစင်းကြောင်းတွေက အမြင်အာရုံကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။
ဒေါက်ဖိနပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်အသားရောင်ဒေါက်တစ်ရံ၊ရှူးဖိနပ်တစ်ရံတော့ဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။ အသားရောင်ဖိနပ်က သင့်ရဲ့ခြေထောက်အသားအရောင်နဲ့တူညီတဲ့အတွက် ခြေတံရှည်တယ်လို့ မျက်စိကိုလှည့်စားနိုင်ပါတယ်။ခြေကျင်းတွေမ၀တ်မိပါစေနဲ့။အဲ့ဒါကသင့်ရဲ့ ခြေထောက်ကို ပိုပြီးတိုသွားစေပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ခြေတံပိုပြီးသွယ်လျချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ရှူးဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ၀တ်တာထက် စကတ်အတို၊ဘောင်းဘီအတိုဝတ်သင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှ ခြေတံပေါ်လွင်ပြီးသေးသွယ် သယောင်ထင်ရစေမှာပါ။
ဇာတ်မြူး- ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ” Lady Bird” Trailer
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ထူးခြားဆန်းကြယ်သော သဘာဝတရားများ